IBeijing Holtop yoBuyiselo loBubushushu boMoya oNtsha izisombululo zeNkqubo yokuPhumelela komoya
Ukwakha iNkqubo yoMoya eNtsha yeeMveliso eziLuhlu olupheleleyo-uMboneleli wakho weSicombululo weHVAC othembekileyo
Indawo yokuhlala i-ERV/HRV
HOLTOP CFA Series Comfort Fresh Air HRV - High Efficiency High yoBuyiselo ubushushu Ventilator
Wall Mounted Series Ductless ERV
Utshintshiselwano loMoya oluNgqo kabini, ukuBuyiselwa kwakhona kwamandla, ukusetyenziswa okuPhantsi, ukuSebenza ngoFiltration PM2.5>99%
Ulwakhiwo olulula, ukuBuyiselwa kwakhona kwamandla, i-Flexible Desgin
I-3D eFanelekileyo yokuTshintsha ubushushu
Ukusebenza okuPhakamileyo 95%,Umzimba uWahable, uBomi beNkonzo ende.
Isilingi Emisiweyo Inkqubo yokuPhumelela koMoya oNtsha. Uyilo oluQhelekileyo, ukuBuyisa kwakhona amandla, isihluzo seHEPA
Yenza unyango lomoya lube nempilo ngakumbi kwaye wonge amandla
IiMveliso zeHoltop kunye neNkomfa yoTshintshiselwano lweTekhnoloji-Isikhululo saseYunnan
Nge-17 kaDisemba, i-2021, iNkomfa yeeMveliso zeHoltop kunye neTekhnoloji yoTshintshiselwano yabanjwa eKunming Intercontinental Hotel. Ngaphezulu kwe-120 abayili kunye nabahlobo babathengisi abavela eYunnan bebezimase lo msitho. Umxholo wale nkomfa uthi “Siphuma eYundian, sakha isixeko samaphupha; ugxile kwi-sp......
Nge-17 kaDisemba, i-2021, iNkomfa yeeMveliso zeHoltop kunye neTekhnoloji yoTshintshiselwano yabanjwa eKunming Intercontinental Hotel. Ngaphezulu kwe-120 abayili kunye nabahlobo babathengisi abavela eYunnan bebezimase lo msitho. Umxholo wale nkomfa uthi “Siphuma eYundian, sakha isixeko samaphupha; ingcaphephe kwisp.........
Sivuyisana neMpumelelo yeeMveliso zeHoltop kunye neNkomfa yokuTshintshaniswa kweTekhnoloji @Henan
Sivuyisana neMpumelelo yeeMveliso zeHoltop kunye neNkomfa yoTshintshiselwano lweTekhnoloji @Henan UMnu Liu Mingshan, injineli eyintloko yeQela leHoltop, wabelane ngengcamango yoyilo, izibonelelo zobugcisa kunye nesicelo kwiprojekthi yemveliso ye-brand ye-Holtop ye-air conditioning. Holto.........
Iinkqubo zokuphefumla ubushushu kunye namandla okubuyisela umoya
Ukungenisa umoya okubuyisela ubushushu kunye nokuphefumla kwakhona amandla kunokubonelela ngeenkqubo zokungenisa umoya ezixabisa iindleko ezikwanciphisa ukufuma kunye nokulahleka kobushushu. Izinto ezilungileyo zobushushu kunye neenkqubo zokungenisa umoya zokubuyisela amandla 1) zinciphisa ilahleko yobushushu ngoko ke igalelo lobushushu elincinane (elisuka komnye umthombo) liyafuneka ukunyusa .........
Ukungenisa umoya: Ngubani okufunayo?
Njengoko imigangatho emitsha yeekhowudi zokwakha ikhokelela ekuqineni kwemvulophu zokwakha, amakhaya afuna izisombululo zokungenisa umoya ngoomatshini ukugcina umoya wangaphakathi ucocekile. Impendulo elula kumxholo weli nqaku nabani na (umntu okanye isilwanyana) ohlala kunye nokusebenza ngaphakathi. Umbuzo omkhulu kukuba sihamba njani malunga ne-p.........
ENTSHA Indawo enkulu Izakhiwo zoluntu Isikolo Esibhedlele Indawo yokuhlala Iplanti yoshishino Ngaphesheya kolwandle
Rongchuang inkqubo yamanzi 40# 41# indawo ejikeleze isixeko
Ukukhanya kwelanga elunxwemeni
Indibano yeMeijiang kunye neZiko leMboniso
IZiko leMboniso leMidlalo yeOlimpiki yaseBusika eBeijing kunye neParalympic
Iziko leMidlalo yeOlimpiki yaseChuzhou
Isakhiwo samaphephandaba ngokuhlwanje
Ihlabathi laseHuazhi Vientiane
Idolophu yoshishino yeJinan ibhendi ebanzi yomsantsa wesemiconductor
Inkundla yaBantu yaseDongming County
I-Tianjin Zhongxin ye-Ecological City kwiYunivesithi yaseMantla eQhelekileyo eManyano neSikolo esiPhakathi
Yizhuang iminyaka eli-12 engaguqukiyo School of Beijing No. 2 kwisikolo samabanga aphakathi
Isikolo seTonglu esineeLwimi ezimbini esiManyanelwe neYunivesithi yaseMpuma China eQhelekileyo
Isebe leWeihai kwisibhedlele saseBeijing
Isibhedlele saBantu seSithili saseWuhan Huangpi
Isibhedlele sikamama nabantwana saseLianyungang Donghai
Isakhiwo sewadi yesibhedlele saseQianfo Mountain
Inkqubo yokungenisa umoya kwiYunivesithi yaseStanford
Iprojekthi ye-Geely Auto AHU
Ubuchule bemveliso yoNyaka
Ithengiswa kuMazwe ali-100+
Thatha wena kwiHoltop Group
Isakhiwo esiphakamileyo esiphakamileyo
Ifowuni: + 86-13602169707
158 HanJiaChuan, iSithili saseHaidian, eBeijing, eChina